लोकेसन खोज्दै हिरोइन, ‘भाँडाकुटी’ लिड लेडीमा बेनिशा – Nepal Press
लोकेसन खोज्दै हिरोइन, ‘भाँडाकुटी’ लिड लेडीमा बेनिशा
२०७७ पुष ३ गते ११:४१
अस्कर कलेजका फिल्म विद्यार्थीद्धय किरण विक र गोपाल आचार्य फिल्म निर्माणको चटारोमा छन् । लकडाउन खुलेलगत्तै पहिलोपटक फिल्म घोषणा भएको हो । यी तन्नेरीले आगामी फागुन १ गतेदेखि ‘भाँडाकुटी’ फिल्म छायांकन सुरु गर्दैछन् ।
किरणले निर्देशन गर्ने फिल्मलाई गोपालले एसोसिएट निर्देशन गर्नेछन् । बेनिशा हमाल र मुकुन भुषाल मुख्य भूमिकामा छन् । ‘कालोपोथी’ एक्ट्रेस बेनिशाले यसमा दलित युवतीको भूमिकामा अभिनय गर्नेछिन् । मुकुन उनको लभ इन्ट्रेस्टको भूमिकामा हुनेछन् ।
बेनिशासहितको टोलीले केही समय पहिले बुटवलको मोतीपुर, सिद्धबाबा र फूलबारीमा छायांकनको लागि लोकेसन हन्टिङ गरेको छ । यही सेटिङमा छायांकन गरिने फिल्मलाई लभ, कमेडी र सोसल ड्रामा जनरामा राखिने भएको छ । प्रेममा जातिय विभेदको असर र सामाजिक द्धन्द्धलाई फिल्मले चित्रण गर्नेछ ।
फिल्म गतिविधि ठप्प भैरहेको बेला निर्माणको घोषणा गर्ने यी तन्नेरीको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । ‘फिल्म बनाउनका लागि यो सहि समय पनि हो’ निर्देशक विकले भने, ‘माहौल बनाउने मात्र हैन, फिल्मलाई नयाँ ढंगबाट सुरुआत गर्न अहिलेको समय महत्वपूर्ण छ ।’
एक करोड लगानीमा बन्ने फिल्मलाई कलम खड्का, डिराज ठकुरी र शीतल खड्काले बनाउन लागेका हुन् । गैरआवसिय नेपालीको लगानी यसमा छ । दृश्यालय सिनेमाले बनाउने फिल्मलाई नयाँवर्षमा प्रदर्शन गर्ने योजना छ ।
प्रकाशित: २०७७ पुष ३ गते ११:४१
वर्तमान अवस्था उजार गर्ने ‘ढाड सेक्ने महँगी’ (भिडिओ)
पूजा शर्माको ड्रिम प्रोजेक्टमा भित्रिए अनमोल, पहिलोपटक अनस्क्रिन जोडी बन्दै
‘के घर के डेरा’ निर्माताको छलछाम : डिजिटल र वितरण अधिकार दुई-दुई वटा कम्पनीलाई विक्री !
देउडाको सुगन्धमा चक्र र अनिताले ल्याए– खेल मेरी दर्कादरी -(भिडियाे)
चलचित्रकर्मीलाई धमाधम परिचयपत्र : के हो उद्देश्य ? के के छन् मापदण्ड ?
बच्चाबारे प्रश्न सोध्दा लजाइन् इन्दिरा, भनिन् मेहेन्दीको रगं पनि उत्रेको छैन
अमेरिकाबाट राजवल्लभ कोइरालाको प्रश्नः मेरो पनि परिचयपत्र बनेको छ कि निवेदन दिनुपर्ने हो ?
इन्दिराको ‘पछ्यौरी’ सार्वजनिक
दिलमाया… दिलमाया… खोइ कसको भूल !